Volvo Crossover XC2016 90 dia hanasongadina ny CarPlay [Video] | Avy amin'ny mac aho
Hanasongadina ny CarPlay [Video] ny Volvo Crossover 2016 XC90
Nanomboka tamin'ny martsa 2014, Volvo Izy dia efa niantoka ny fanohanany an'i CarpPlay an'i Apple tao anaty fiarany. Ny fiandrasana hahita an'ity zava-misy ity amin'ity fanohanana ity dia efa elaela izay. Saingy nifarana ihany tamin'ny farany, satria ny mpanamboatra (Volvo) dia nanamafy fa ny fiarany voalohany manohana ny rafitry ny CarPlay Apple no Volvo XC2016 Crossover 90, ary izy io dia hanana tontonana Efijery mikasika 9 inch ao amin'ny console afovoany mba hahazoana fidirana mora. Ny tapany ambony amin'ny efijery izay azontsika jerena amin'ny horonantsary dia ho an'ny singa fifandraisana hafa amin'ny alalàn'ny 'Volvo Sensus Connect', raha ny antsasaky ny efijery ambany no hiseho azy CarPlay.
Misy bokotra eo amin'ny familiana ny XC90 azo tsindriana miditra amin'i Siri, fa taty aoriana ny mpamily dia afaka mandika ireo hafatra irina, ankoatry ny zavatra maro azo Direcciones, Spotify, ary maro hafa. Ny zavatra iray manamarika dia ny fampiasana CarPlay, ny tompona Volvo XC90 dia mila mampifandray ny iPhone mivantana amin'ny rafitra amin'ny alàlan'ny seranan-tsambo miaraka amin'ny tselatra. Volvo dia nampita fa hanohana ny CarpPlay a fifandraisana tsy misy tariby, indraindray amin'ny ho avy.
Ho an'ny tompona ankehitriny Avy amin'ny Volvo XC90, ny fiara dia azo atao amin'ny fampiasana Apple CarPlay, izay nanamoran'izy ireo ny fahafahany nanao fotoana hifanarahana amin'ny serivisy teknika, hahafahan'izy ireo manampy ny fiasa amin'ny alàlan'ny fanavaozana ny lozisialy, sy hahafahany mampiasa azy raha tsy misy olana.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » Hanasongadina ny CarPlay [Video] ny Volvo Crossover 2016 XC90
Amin'ny lafiny iray dia faly aho fa ny XC90 dia efa miaraka amin'ny CarPlay, satria fiara mahaliana ahy izany, ary na ahoana na ahoana dia miparitaka izy io, dia toa fandrosoana izany. Ianao dia mila mampifandray ny iPhone amin'ny tariby, toa fanemorana ahy izany, antenaiko fa hifindra haingana mankany amin'ny fifandraisana tsy misy tariby izy ireo.
Etsy ankilany, heveriko fa avy amin'ny Anglo-Saxon ny lahatsoratra, ary misy tsy fitovizan'ny fitsipi-pitenenana ao amin'ilay fandikan-teny. Aza misalasala manitsy ity ampahany amin'ny hevitra ity raha heverinao fa ilaina izany. Fa ny XC90 dia hanana CarPlay. Ary ny andalana roa farany dia fanafoanana ny fitsipi-pitenenana kely: aorian'ny koma voalohany, mety misy "para" tsy hita ve? Azo atao ve ny mampiasa Apple CarPlay? Taiza no nanamoran'izy ireo ny fanendrena? Heveriko fa tianao holazaina fa nanamora ny fanendrena fotoana i Volvo. Ary azon'izy ireo atao ny manampy ny lahasa "amin'ny alàlan'ny fanavaozana lozisialy"? Niala tamin'ilay volavolan-dalàna io, azo antoka.
ENY, manana fotoana malalaka be dia be aho.
Ary raha hiresaka ... Ao amin'ny andalana faharoa dia tokony hilaza hoe "mahatsapa" fa tsy "mahatsapa". Manana fotoana malalaka aho. Ary tsy toy ny taloha intsony ny fahitako. 😀
CleanMyDrive 2 tonga amin'ny fomba ofisialy ao amin'ny Mac App Store
Apple mividy startup Emotient hampivelatra rindrambaiko miorina amin'ny fanekena ny tarehy